Ònye hapụrụ Forex - Best Forex EA si | Ọkachamara advisors | FX ígwè ọrụ na-
HomeForex SchoolOnye trades Forex
Ònye hapụrụ Forex? Liquidity & sonyere na
The Size na uto nke Forex
Na a trading olu nke karịrị $ 4 puku ijeri kwa ụbọchị, Forex bụ kasị na kasị mmiri mmiri ahịa na ụwa. N'eziokwu, olu-ere Forex bụ elu na ọ dịghị data dị, ọ bụ ezie ọ bụla afọ atọ na BIS (Bank of International Settlements) ebipụta pụta a nnyocha e mere na isi ahịa sonyere na-emepụta ihe na-eme atụmatụ dabeere na Ibọrọ nwetara.
Onu ahia ahia ahia nke mba uwa, site na ngwa
Nkezi ntụgharị ụbọchị kwa ụbọchị n'April, na ọtụtụ ijeri dollar US
Mba ọzọ mgbanwe ngwá 1,527 1,239 1,934 3,324 3,981
Abù Azụmahịa 598 386 631 1,005 1,490
chara n'ihu 128 130 209 362 475
Ego Swaps 10 7 21 31 43
Nhọrọ na ndị ọzọ na ngwaahịa 87 60 119 212 207
Isi Iyi: Triennial Central Bank Survey, 2010
Tebụl dị n’elu na-egosi mgbanwe mgbanwe kwa afọ nke ukwuu n’olu ụwa dum kwa afọ n’afọ iri na ise gara aga, na-eto site na 0.8 trillion na 1992 na 3.9 trillion site na 2010, na-amụba ihe karịrị ugboro atọ nha. Ọ kwesiri ịmara na Forex agbasawanye nke ukwuu ebe ọ bụ na Onye isi ala Nixon mechiri windo ọla edo yana a ga-ahapụ ego ndị ọzọ na-echekwa ego na ndị na-eche echiche nwere ike ị nweta uru. Mana ezigbo "oke ọsọ" ọla edo n'ahịa azụmaahịa emeela n'afọ 10 gara aga, n'ihi ịntanetị, Euro ọhụrụ, na ụzọ ụzọ ogbugbu kọmputa belata ọnụ ahịa azụmahịa na ụba ahịa ahịa. Ma ndị na-azụ ahịa buru ibu ma ndị obere na-ahụta na ngwa ngwa Forex na-aghọ ebe azụmahịa na-atọ ụtọ ma dị ọnụ ala karị ma na-ebugharị ihe ndị ha na-akọkarị na ya.
Dị nnọọ ka na-etinye $ 4 puku ijeri kwa ụbọchị azụmahịa olu na n'ọnọdụ, ọ bụ 100 karịa niile na ngwaahịa-mgbanwe ọnụ. Ma ọ bụrụ na ị na-eji tụnyere ya na $ 25 ijeri a ụbọchị olu nke New York Stock Exchange, ị na-eche na asusu nke otú ọ bụ na ebuka nwere otú ahụ buru ibu na-ewu ewu, ka Forex bụ ka ọbịa echiche ọtụtụ ndị.
Olee uru ndị na-enwe a ịrịba kwa ụbọchị azụmahịa olu?
Anyị, obere retail ahia, nweta ATỌ uru site na-enwe a ahịa kasị ukwuu na nke kasị mmiri mmiri na ụwa:
Immediate imepụta: Higher liquidity sụgharịta n'ime ozugbo rijuru afọ na-egbu. min-egbu oge.
Egbu anya price: Higher liquidity sụgharịta n'ime anyị jupụtara na-atụ anya na price. min slippage (Ewezuga n'oge dị ezigbo mkpa ozi ọma ọkwa).
Ọ bụrụ na Forex bụ otú Big, Gịnị Mere bụghị Forex Dị Popular Dị ka The Stock Market?
Ihe abuo. Ọ bụghị dị ka nke ochie, ọ bụrịrị onye na-azụ ahịa obere “azụmaahịa” nso nso a.
Akpa, ukwuu ntule na free ọnụ ahịa mgbanwe ego na-agbagharị agbago abụwo azụmaahịa ọhụrụ, na-amalite karịa ma ọ bụ na-erughị na 1971 mgbe usoro nke ego Bretton Woods gbagoro (“kwụrụ ụgwọ”) nnukwu ego na US Dollar (nke onwe ya chere na ọ ga-agbanwe ya ka ọ bụrụ ọla edo. ). N'August 1971, Nixon kwụsịrị ntụgharị maka ọla edo, nke kwụsịrị ihe edoziri, “ndụ ọla edo kwadoo” ndụ 26 afọ (1945-1971), ma kwere ka ego na-adịzi ọzọ. free na-ese n'elu ma na-ede akwụkwọ (fiat). New York Stock Exchange (NYSE) dị iche na gburugburu May 17, 1792, nke na-enye ya mmalite nke afọ 179 +.
Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ntule na free Ego ndị na-ese n'elu mmiri anọwo kemgbe 1971, ọ bidoghị mgbe ihe gbasara 1996 ka ndị ahịa (ndị na-ere ahịa) nwere ike irere ya. Naanị ndị bara ọgaranya, dị ka akụ na oke ego, nwere ohere ịzụ ahịa ya. Mana enwere ihu ọma anyị enwere mgbanwe ndị mere ka anyị nwee ike ịbanye na klọb nwata nwoke a bụ ọgaranya naanị. Site na 1998, ịntanetị abawanyela ewu ewu na nke a mere ka ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-emeghe ụlọ ahịa n'ịntanetị ma nye ndị obere obere ohere ịnweta ụzọ eletrọniki nke ụzọ abụọ si mba ọzọ.
Ya mere Forex dịtụ ọhụrụ ka obere ahịa, na mgbe ọ bụ ọtụtụ ugboro ibu na-eto eto exponentially ngwa ngwa karịa na ngwaahịa ahịa, ọ ga-ewe oge ụfọdụ tupu na-dị ka a maara nke ọma.
A ole na ole ruo iri afọ gara aga, ndị isi ndị na-Forex ahịa bụ azụmahịa anoghi n'ulo oba na were ọnọdụ megide ndị ọzọ bịara n'ikperé mmiri nke a dịgasị iche iche nke ihe ndị mere (ntule, hedging, wdg), na sịrị (exporters na Importers nke ngwaahịa na ọrụ) ga-eji mmiri maka ha mba ọzọ mgbanwe azụmahịa. All ọrụ a mere banyere 70% nke mkpokọta olu site na Forex.
Ụbọchị ndị a, Otú ọ dị, ahịa agbanweela. Na ọhụrụ na nkà na ụzụ na-na ikike na-eduzi azụmahịa esenidụt na ihe ala, ndị ọzọ oru nwere ike ikere òkè, nakwa dị ka onye na investors na-azụ ahịa.
Ụbọchị ndị a ntule akụkọ ihe karịa 95% nke n'ozuzu kwa ụbọchị ọrụ, nke pụtara na ọtụtụ n'ime ndị sonyere ịzụ a ego na-enweghị ebumnuche nke na-anata otu akwụkwọ ego. Ndị a azụmahịa na-mụụrụ si azụmahịa anoghi n'ulo oba onye ahịa.
The isi sonyere na Forex bụ: anoghi n'ulo oba, Central anoghi n'ulo oba, azụmahịa na ụlọ ọrụ, oke ego, na onye ahịa, Na isi ihe mere ha isonye na Forex ahịa bụ:
Uru site fluctuations na ego ụzọ abụọ, ndinọ ekikere esie
Protection si afụ ego ụzọ abụọ, ewepụtara trading ngwaahịa na ọrụ, hedging
Uru site rollover N'ịbụ iche dị na mmasị ọnụego
E nwere ọtụtụ narị nnukwu na obere mmiri na-ekere òkè Forex ahịa na ebumnobi na-dechapụ ha onwe ha mba ọzọ mgbanwe dị ize ndụ ma na nke ha na ndị ahịa, nakwa dị ka na-amụba akụ na ụba nke ha ngwaahịa ejiri. Onye ọ bụla akụ, ọ bụ ezie na dị iche iche a haziri ahazi, nwere a omume oche maka iji egbu, ahịa Ndinam, na n'ihe ize ndụ management. The ọrụ nke omume oche nwekwara ike ịbụ na-eme ka uru trading ego kpọmkwem site na hedging, arbitrage, ma ọ bụ a dị iche iche n'usoro nke azum.
E nwere 25 isi mmiri na akaụntụ maka ọtụtụ ndị transacted olu, nke top iri na-hụrụ n'okpuru ke table:
EuroMoney FX nghoputa
Pct mgbanwe YoY
na na na naa 7 5.86% -5.48%
Ebe E Si Nweta Suisse 8 4.68% -2.50%
Isi Iyi: http://www.Euromoney.com Forex nnyocha e mere
The top EBIONITISM interbank ahịa akụkọ ihe 53% niile azụmahịa. Mgbe ha e nwere nta anoghi n'ulo oba, sochiri multi-mba corporations (nke mkpa oke ize ndụ ma na-akwụ ụgwọ ọrụ na mba dị iche iche), nnukwu oke ego, na ụfọdụ nnukwu retail FX ahịa eso.
Banyere ego na-etinyekarị onwe ha n'ahịa ahịa na-eduzi echiche nke mgbasa ozi, na ihe dị iche na ha site na ndị na-abụghị ndị na-echekwa ego na bank bụ ihe ọmụma ha "pụrụ iche" nke ịzụta na ire ahịa nke ndị ahịa ha n'oge ọ bụla, nke enye ha ihe omuma banyere ahia ahia na ire ere nke ugwo mgbanwe. Mana nke a bụ uru bara uru, n'ihi na ọ dịghị otu ụlọ akụ buru ibu karịa ahịa, na ụlọ akụ dịka ihe na-adịghị mfe maka nnukwu ihe ndị na-akpata nchekwube nke aka ha na ịzụ ahịa efu.
The interbank ahịa bụ a fancy ụzọ na-asị na mmiri ahia na onye ọ bụla ọzọ, na-anọghị a Central ahịa ebe. The interbank ahịa nwere ike kacha mma ga-aghọta na okwu nke a na netwọk esịnede mmiri na ego oru nke, ejikọrọ site na ha na-emeso tebụl, kpakorita mgbanwe udu. Nke a interbank ahịa ka e kee maka ọtụtụ iri afọ. Otú ọ dị, na 90 si a usoro ihe omume eketịbede (deregulation, internet, esiwanye nile e electronic trading netwọk na-abịa usoro) na-ekwe ntoputa nke na-ere ahịa na agbanwe isonye na interbank ahịa na nnọchite anyị, ka anyị na-uru nke ọhụrụ ada ohere na Forex trading ụwa na-enye elu leverage, ala minimums, na 24 / 7 trading.
Central anoghi n'ulo oba bụ isi na egwuregwu na Forex ahịa, ọ bụ ezie na isi ihe mere ha na-etinye aka bụghị n'ihi uru kama ikwado ha gọọmenti ego atumatu (ọkọnọ na nnweta ego) na-enyere larịị mmajijiji nke uru nke ha ego (mmasị ọnụego).
A akụ etiti nwere ike itinye aka maka ndị na-esonụ:
Nwetaghachị price nkwụsi ike nke ihe ọnụego mgbanwe
Iji chebe ụfọdụ etoju nke price na ọnụego mgbanwe site na a siri ike -emekarị ma ọ bụ ahaghị nhata
Mgbe aku ihe mgbaru ọsọ dị mkpa ka a na-enweta (onu oriri, ibu, wdg)
Ụfọdụ Central anoghi n'ulo oba na-ọzọ mgbanwe karịa ndị ọzọ; ụfọdụ itinye aka mgbe nile (dị ka ndị Japanese Central Bank).
Ihe kacha mkpa Central anoghi n'ulo oba bụ:
The Federal Reserve (US akụ etiti)
Onye isi ulo oru aka nwere ike iburu uzo di iche iche: 1) ire ahia iji zoo ahia karia ma obu ire ire ahia; 2) na-eme ka ego a na-achọ iji mee ka ego ahụ dị ike, iji belata ya; na 3) na-abanye n'ahịa ma na-egosi na ọ bụ ihe ga-ekwe omume, site n'ikwu okwu na mgbasa ozi banyere ọkwa dị mma maka ego ahụ, na-atụgharịkarị dị ka ihe ga-eme n'ihu ọrụ (akpọ "jawboning").
Na oké ọnọdụ, ihe atụ, mgbe a siri ike -emekarị ma ọ bụ ahaghị nhata na a mgbanwe ego ọnụego, ntị ka Central onye oru banki na ihapu otutu okwu na omume, dị ka ihe aka ike ga-adiaha ná mgbalị laa azu ọnụego mgbanwe na ya ghara ịdị irè a -emekarị setịpụrụ speculators. Ka ihe atụ, Swiss National Bank (SNB) na Bank of Japan nwere ma na-etinye aka na-adịbeghị anya akụkọ ihe mere eme na-eke nnukwu Nkea na ego ahịa. .
Ulo oru na ụlọ ọrụ ha
Big na obere ụlọ ọrụ (site na nta Importers / exporters na multi-ijeri, multi-mba corporations) isonye na Forex iji ahia ngwaahịa na ọrụ ná mba ọzọ, oke ize ndụ, na-akwụ ndị ọrụ na mba dị iche iche. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amasị ga-akwụ ụgwọ n'ụlọ ha ego ma ọ bụ US dollar iji mezue azụmahịa dị ha mkpa inweta mba ọzọ ego site azụmahịa obot. Ihe ọzọ mere a azụmahịa ụlọ ọrụ nwere ike isonye na Forex ahịa bụ na oke ha ikpughe; ka ihe atụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ bụ na-enweta ego na-eme n'ọdịnihu na ya n'ụlọ akwụkwọ ego, nakwa na ego e depreciating, ụlọ ọrụ nwere ike na-aga obere (ere) ya n'ụlọ akwụkwọ ego na-aga ogologo (ịzụta) nke ọzọ ego na otu ego nke ugwo na-natara, si otú ahụ na-ezere ihe ize ndụ nke price mmajijiji.
Oke ego na Investment Management Firms
oke ego ndị nwere ihu ọma na mba na anụ ụlọ ego oru, na ha nwere ike ahia na ọtụtụ narị nde, dị ka ha ọdọ mmiri nke ego ego agbasaghị inwe nnọọ nnukwu. The net akpan owo uru nke a oke nwere ike na-agba ọsọ n'ime ọtụtụ ijeri, na oké akụ dị elu ka n'ihi nke leverage na agbaziri. Ndị a oru na-etinye ego na nnọchite nke a nso nke ahịa tinyere ụgwọ ezumike nká ego, ụlọ ọrụ ịnshọransị, ibe ego, bara ọgaranya investors, ọchịchị na ọbụna Central anoghi n'ulo oba. Government-ọsọ ego ọdọ mmiri mara dị kaỌkaakaa akụ na ụba ego (SWF) emewo ngwa ngwa na-adịbeghị anya, ụfọdụ nwụchiri isiokwu ntị nke na-eme ihe ọjọọ investments na Wall Street ego sịrị. All ndị a oke ego na-egwuri na-esiwanye ọrụ dị mkpa ego ahịa n'ozuzu, na FX akpan akpan, ebe ọ bụ na 2000s, na ọ bụ ha ibu na trading ọrụ na-akụkọ ihe mere n'elu 80% nke mba ọzọ mgbanwe azụmahịa na-ada.
Mba ọzọ mgbanwe uru ihe ndị dị ka liquidity leverage na dịtụ ala na-eri ike a pụrụ iche ego na gburugburu ebe obibi maka ndị a nnukwu ego sonyere. The oke ego nke nke Forex abịa na-akpa a ukwuu mmetụta na ego ọnọdụ na ụkpụrụ dị ka oge na-aga n'ihu. Ha bụ entities na n'ezie ịkpali ego ahịa, ịzụ ma ọ bụ na-ere nnukwu ichekwa na ufọt ufọt (izu) na ogologo oge (ọnwa ka afọ), na ha nnukwu azụmahịa mgbe ụfọdụ unbalance ahịa, na-achọ price mgbanwe rebalance ina na ọkọnọ. Ka ihe atụ, Billionaire George Soros (Nọchiri n'elu) mere ya uba trading FX-ya, na kwantum enweta ego nweela a aha nke ike ike ntule kemgbe 1990. The ego ebubo nke itinye nsogbu na ego na ozugbo na-erite uru ya ada azum: mbụ Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad ata ụta na mweda nke Malaysian ringgit na 1997 on George Soros. George Soros ka gbachiteere na ọ bụ nanị na-aghọgbu mara adịghị ike na mba ego usoro. The ịgbagha bụ na mba ụfọdụ, ndị ndú ya nwere ike ịzụlite unsustainable ego egosipụta ma ọ bụ n'ụzọ mishandle ha mba aku, na FX speculators ka-apụghị izere ezere na ida-eme mee elu mee kama ọ ikwe ka ọ na-ekpetekwa ogologo ma na-ibu.
Anyị na obere ahịa na-akpọ retail ahịa, dị ka megide institutional ahịa, na ọ bụ ezie na anyị na-ekere òkè FX ahịa abawanyele n'ike n'ike ke akpatre 10 afọ, anyị ka na nkejikotara 2% nke dum FX ahịa olu, na nkezi kwa ahia olu nke n'elu US $ 50-60 ijeri.
E nwere ihe abụọ uru na ịbụ obere azụ na nnukwu ọdọ mmiri: na ibu ibu ahịa tinye ahịa si liquidity, na anyị obere size na-enye anyị ihe mgbanwe awụgharị. Anyị ekwuola na liquidity uru ihe na-akpata: ozugbo na uzo egbu. Mgbanwe na-akpata bụ akpali iji mara dị ka mma. N'ihi na anyị na etiti oge na ego mmiri bụ n'ozuzu ukwuu mkpumkpu, na anyị na-adịghị ihe ọ bụla mmetụta na ina / ọkọnọ ịha na nchịkọta, anyị trading na ụdị na-ala mpịakọta ekwe ka anyị nwere ihe mgbanwe tinye na wepuÚ ahịa. Otú ọ dị, ọ ga-ahụ kwuru agbanwe na anoghi n'ulo oba n'ozuzu nye ukwu tighter gbasara iji ibu ahịa, nke na-enye ha a na-eri uru na anyị na-enweghị.
Ugbu a anyị kpuchie a kwere omume uru anyị nwere na ịbụ obere (ọzọ mgbanwe ntinye na ụzọ ọpụpụ ohere), ọ dị mkpa ka a mata anyị mwepu: n'ihi na anyị bụ ndị obere azụ na a ọdọ mmiri, nke kasị ala na nri yinye na okwu nke size na sophistication, anyị bụ ndị kasị ngwa ngwa eri elu. 95% of retail ahịa ida. The ibu ahịa (anoghi n'ulo oba, corporations na oke ego) bụ azụ shark na mmiri a, ha na-erekwa ehihie na abalị, ha maara na ins na outs nke na ahịa na ha na-eri na-adịghị ike. Ha na-eji ọkaibe trading usoro na sniff si unsophisticated ahịa ndị na-yikarịrị ka na-etinye nkwụsị iwu na ihe doro anya na-etoju nke nkwado na-eguzogide. New ahịa na-yikarịrị na-eso ndị kasị ewu ewu ụlọ akwụkwọ echiche na isi ma ọ bụ na oru analysis, na otú ha obere okwu directional echiche ọjọọ pụrụ mgbe mgbe ga-hụrụ na emegbu umu azu shark. Ụfọdụ agbanwe na-ebipụta ha na-ụlọ oke nke longs na nịịka na ọ bụla e nyere ego na ihe ọ bụla e nyere n'oge, a na-akpọ mmetụta, na ebe ọ bụ na ha maara na ọtụtụ retail ahịa ida, nkwanye bụ ahia counter na retail mmetụta ma ọ bụ directional echiche ọjọọ.
Ka a retail ahia izere ịdị na-a aja na ibu ahịa, o kwesịrị izere ihe ọ bụla nke ọhụrụ ma ọ bụ na-ewu ewu ozi ọma ihe na ụlọ akwụkwọ echiche. Ọ bụrụ na ọ na-aga na-eso onye ọ bụla, ọ pụrụ inweta uru ndị ọzọ si na-agbalị soro ngagharị nke nnukwu Player, nke a pụrụ mere site na kwesịrị ekwesị nkọwa dị iche iche na aku na uba na-akọ, dị ka-enwe kwa izu ndina akụkọ, nke na-egosiputa na directional echiche ọjọọ nke nnukwu ahịa na dị iche iche ego ụzọ abụọ.
Nhọrọ, onye nwere ike soro ngagharị nke nnukwu ahịa site na isoro price ihe na ibu etiti oge chaatị dị iche iche. Higher oge okpokolo agba, dị ka anọ hour na kwa chaatị dị iche iche, na-ekwupụta na ebumnuche nke ibu egwuregwu. Nhọrọ, onye pụrụ agbalị ịbụ contrarian na-agbasokarị na ọnọdụ nke nta egwuregwu. N'eziokwu, ị ga-ịzụlite gị onwe gị na trading usoro na ọkaibe multi-etiti oge mmiri nwere onu n'elu ma nnukwu na obere ahịa na a usoro a ga-ahịa ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ na-automatized. More on a na mgbe e mesịrị ngalaba.
Ònye hapụrụ Foreign Ego